Wadahadalada Ahlu-sunna iyo Galmudug oo weli la isku mari la’yahay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wadahadalada Ahlu-sunna iyo Galmudug oo weli la isku mari la’yahay (AKHRISO)
Wararka naga soo gaaraya xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in weli la isku mari la’yahay wadahadalada halkaasi uga socday xubnaha kala matalaya Ahlu-sunna Waljameeca iyo maamulka Galmudug, xilli la qorsheeynayay in wadahadalkaasi lasoo gaba-gabeeyo.
Ahlu-sunna Waljameeca ayaa la sheegayaa inay haatan la timid dalab aad u adag oo ay weli ka biyo diidsan yihiin xubnaha wadahadalkaasi u matalaya maamulka Galmudug.
Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo wadahadalkaasi ayaa waxay sheegayaan in Ahlu-sunna Waljameeca ay dalbatay in la siiyo xilal aan macquul ahayn, kuwaas oo kala ah;
– Inaan lagula tartamin xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug
– In la siiyo xildhibaano, wasiiro u cayiman iyo xilal kale oo maamulkaasi ka mid noqon doonna.
– In dowladda dhexe laga siiyo xilal kala duwan, sida agaasimayaal, safiiro iyo saraakiil ciidan, taas oo macquul ahayn maadaama wadahadalka uu kala dhaxeeyo maamulka Galmudug oo kaliya.
Ahlu-sunna oo haatan maamusho labo degmo oo ka mid ah gobolka Galgaduud ayaa u muuqdo in wadahadalkaan uu iyaga dhinacooda ka socon la’yahay, maadaama uu dalabkooda ku jiro in dowladda dhexe xilal laga siiyo.
30-ka bishaan ayaa lagu wadaa in magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud lagu qabto doorashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug, iyadoona wadahadalada labada dhinac ay weli u muuqdaan mid weli la isku afgaran la’yahay.